Dargagoon Oromoo Barsisuu fi Mari’achisuu qabna.
Dargagoo waan barsisuu qabnuu irrati yaada wal jijiruu gariidha:
Dargagoon siirna gadaa keessati xiyyefanoo adda adda itti kenantuu basisisuu, wagga 1_8 ijoolee haadha birrati afaan fi waan bala irra isaan hambisuuf baratuu, 8-16, 16-24, 24-32, 32-40 hoji dandeeti adda adda irrati barumsa baratuu, Abbootii fi haawwassa irra baratuu, Horii tikkisuu irra kasse adamoo, qoonaa,lola, ijararsa, gorsa fi bulchinsa ykn seena siirna gadaa hunda baratuu. Akka barnoota amayaa hara kana ta’uu batee ilee barumsa gudadha. Hayyuulen ykn abootin gadaa dargagoota isaan siirti barsisuu. Uni ilee hara barumsa amayya qoofa utuu hin ta’iin siirna gadaa fi Oromumma barnoota amayya ciinati dargagoota barsisuu qabna. Barnoota yeeroo dheera kana booda bara 40_48 keessa Ogana ta'uu.
Abban ijoolee isaa waan tokko qoofa nama hin gorsuu gadhees gariis hunda nama gorsa, warii poltical leader wayee siyyasa of gegesan nama gorsuu national leader amoo waan biyya nama gorsuu, kanaafu dargagoota keenya kan gorsiinuu bakka Oromoo ga'uu qabuu akkekuu qabna, waan isaan borif jeedhan haraa hojeechuu qaba gorsuu qabna. Gorisii keenya waan Oromoo fayyada ta'uu qaba waan ana ykn dhabba koo qoofa fayaaduu ta'uu hin qabuu jeedhen amana kanaafu dargagaoon Oromoo waan atataman goochuu qaban lamatu jira :-
1. Waarii biyya ala jiran barumssa amayaa warii gudatan itti fayadaman saayinsii fi tekinology, qoona amyyaa, industiry, ICT, afaan, kitaaba amaya fi muxaannoo gargara afaan Oromooti jijiruun beekumsa amayaa Oromiyaa galchuu qabuu,
2. Warii biyya keessa jira amoo Adda bada adeemuu akka Siirna Gadaa, Safuu, atete, Geerarsa, Geeloo, siirba halkan, dadoo kkf fi jeetoota mangudoota fi mamakisa Oromoo ganda Oromiyaa hunda keessa qooratan Encyclopdia Oromiyaa guda fi Kataboota gugurda gadii basuu qabuu,Universityn Oromiyaa keessa jiran Departmentin Afaan Oromoo kana irrati balinan hojeechuu qaba.
Beekan Gulummaa Irranaa dubii kana siirti waan beektuuf Egere University Oromiyaa gudaa Fifinfinnee irrati Addaa, Afaan, Dinagide, Haawwasuma, bulchinsa siina gadaa (Oroummaa) qoona, daldala fi kkf hunda qorate gudisuu waluman hundesuuf bu’uura lafa qabnu irrati hojeechuu egale jira. Hayyuulen Oromoo Qubee Generation kun yoo akka namati jirachuu barbadanf jabatan hojeechuu qabu, Oromiyaa fi Orummumma jirachisuu qabu biyaa Bilisoomte fi Oromiyya walabomtee ijarachuu qaba. Kun ta'uu banan biyaa Ethiopia keessati bakka hin qaban akka keenya ilee Afaan Amahara hin beekan waan ta'ee biyya isaa Oromiyaa walaba ijarachuuf halkan guyya hojeechuu qabu. Beekan Gulummaa fi Dhaloon qubee qaqaroon waan hunda caalaa kana irrati hojeechuu qabu. Kana hunda dhugomsuuf garuu dura Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyya mirkaneesutu dirqama. Oromiyaan haga Walaboomtuti jeene ta’uu hin qabnuu kara lachuu hojeechuu qabna.
Dargagoon Oromoo cimmaa irrati hojeechuu qabduu. Hojin cimmaan kan hojeetamuu umurii dargaguma keessati, siirni gadaa kana siirti qooratee hoji qoqodee lafa ka’ee jira siirna sana hoji iraa olchuu qabna. Fakeenyaf Ogana ta’uuf umurii 40_48 murtesaan kun murtee haqati nami humna fi dandeeti guda kan qabuu yeeroo kana keessati, umuri 40 dura bilchata miti, isaa booda amoo humanatuu hin jiru. Oromoo yoo haqa barbada siirna gadaa tufachuu dhisee isaa foyeefatee isaan wal bulchuu qaba. Qubee Generation siirna Habasha waliin jirachu hin danda'uu yoo akka TPLF goocha jirtuu kana dhagga kara irra naqee jirachuu filatee malee, akka abba biyyati biyya isaa irrati seeran hojeete jirachuu hin danda'uu.Oromoo biyyati keessa akka nama lamafati jirachuuf dirqama Afaan biyoolessa biyyati ilee waan hin beeneef mirga gutuu hin qabuu, kanaafu murte abba biyyuma isaa murtefte sun cimmise walabumma isaa mirkanefachuu qaba.